Mamelona Tahotra Ny Fitsikilovan’ny Governemanta Ny ‘Resaka Firaisana Ara-nofo’ Tao Zeorzia Navoakan’ny Wikileaks · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Mey 2016 5:43 GMT
Nahatonga ireo Zeorziana hahatsapa ho miaina eo ambany fanarahamaso lalandava ataon'ny fanjakàna ny nivoahan'ireo tantaranà firaisana ara-nofo manala baraka anaty lahatsary .
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy tamin'ny EurasiaNet.org ito manaraka ito, nosoratan'i Giorgi Lomsadze. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Nomena anarana hoe horohoro ara-tsaina, ny fametrahana tato ho ato ny “Wikileaks momba ny Firaisana ara-nofo” ao Zeorzia, lahatsarinà firaisana ara-nofo hita amin'ny Aterineto izay mikendry ireo olo-malaza, nahatonga ireo Zeorziana maro hiaina ho toy ny voatsongo amin'ny tena fiainana, izay misy fakantsary miafina maka ireo fotona faran'izay tena fiainana manokana sy miafin'ireo olon-tsotra.
“Afaka ampiasaina hanenjehana anao ny zavatra rehetra ataonao ao anaty efitrano fandrianao,” hoy ny hanihanin'ireo Zeorziana sasany ao aminà adihevitra amin'ny Aterineto, taorian'ny nivoahan'ilay rakitra farany tamin'ny YouTube ny 11 sy 14 Marsta. “Mety ho ianao no manaraka!” hoy ny lohatenin-dahatsoratra fampitandreman'ny Rezonansi, gazety mivoaka isanandro.
Misokatra ho amin'ny adihevitra ny hoe iza no mitantana ao amin'io efitra fanarahamaso io. Inoana fa manana angonà lahatsarinà firaisana ara-nofo betsaka ny polisy misahana ny filaminana, fa nikendry ireo mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny mpanohitra kosa ireo lahatsary nalefa ny 11 Martsa.
Itovian'ny vahoaka ny hevitra hoe, tena voalamina avy any amin'ny sehatra avoavo kokoa iny hetsika lahatsary farany iny. Manisy teritery hafa indray amin'ny governemanta izany, indrindra anatinà taona ho fifidianana ny parlemanta, mba hampisehoana hoe malalaka tsara sy tsy miankina na amin'iza na amin'iza ary mijery ifotony ny fanadihadiany. Nangataka ny fanampian'ny FBI moa izy ny amin'ny fijerena ny fiavian'ireo lahatsary.
Hatreto aloha, olon-tsotra dimy no nosamborina, nolazaina ho tafiditra tamin'ilay fanalàm-baràka; ny iray, Nikoloz Khachapuridze, mpiasa tamin'ny vaninandron'i Saakashvili, tao amin'ny sampana polisy miafina an'ny ministeran'ny atitany, ny Departemantan'ny Filaminana araky ny Lalàmpanorenana. Iray hafa koa, i Zurab Jamalashvili, rain'i Vitali Jamalashvili, mpiasa fahiny tao amin'io sampandraharaha io ihany, izay niha-tazana be taorian'ny filazàna azy ho nijirika ny solosaina manokan'i Ivanishvili nandritra ny fampielezankevitra parlemantera 2012.
(Hitan’ny fanadihadian'ny EurasiaNet.org ny taona 2013 fa toa hoe nanome tolotra ny handraisana an'i Jamalashvili hiasa indray ny ministeran'ny filaminana anatiny taorian'ny nahazoan'ny Georgian Dream ny governemanta. Mandà ny haneho hevitra ny minisitra.)
Miaraka amin'ireo voatazona, miompana kokoa amin'ny mpomba ny Tandrefana, ny mpanohitra Antoko Demokraty Malalaka, tantanan'ilay Minisitry ny Fiarovana teo aloha Irakli Alasania, ny ankamaroan'ny fijerin'ireo olona an'ilay fahafaham-baràka. Eo an-dàlan'ny ho lasa làlana azo hitsofohana amin'ny fanamafisana ny fitondran'ny Georgian Dream ilay vondrona, ary antoko mpanohitra lehibe indrindra amin'ny firenena, ny Hetsika Nasionaly Mivondrona, amin'ny fifidianana parlemantera amin'ity taona ity.
Hita tao anatin'ireo lahatsary ny mpikambana roa avy amin'ny antokon'i Alasania, iray amin'ireo nandrahona mihitsy hoe hiaka-tsehatra manaraka i Alasania.
Tamin'ireo fanehoankevitra ny 15 Martsa tamin'ny tafatafa mivantana amin'ny fahitalavitra nalefan'ny UNM mpomba ny Rustavi2, nampangain'ny minisitra teo aloha ny Georgian Dream sy ny Hetsika Nasionaly Mivondrona, ilay nodimbiasany teo ambany fitondran'ny Filoha teo aloha Mikheil Saakashvili, ho naka lahatsary an-tsokosoko ireo fiainana manokan'ireo olom-pirenena ambony toerana mba hiantohany tsara hoe azo itokisana sa tsia.
“Ny governemanta teo aloha [UNM] no mibaby ny tsiny, izay nanomboka nanao fakàna sary toy izao, ary ihany koa ny governemanta vaovao [ny Georgian Dream], izay tsy niaro ny vahoaka tamin'ny fiparitahan'ireo sary ireo, ary nanao ny toy izany ihany koa izy,” hoy i Alasania niampanga.
Nampifandraisany tamin'ny fitsapàna hevi-bahoaka nivoaka vao haingana teo ireny fiporitsahana ireny, izay nampiseho ny fihenàn'ny fanohanana ilay fiaraha-mitantana. Nisaraka ny taona 2013 i Alasania sy ny Georgian Dream teo amin'ny fifandraisana narisarisa tamin'ilay minisitra tamin'izany fotoana izany, sy ny mpanorina azy, ny Praiminisitra teo aloha Bidzina Ivanishvili, izay nahatsapa ny fisian'ny fifaninanana ara-politika, ka indray andro nilaza ampahibemaso mikasika ny lazainy ho fifanaovana fotoana nisy teo amin'i Alasania sy ny vadin'ny mpikambana ambony ao amin'ny UNM.
Ny 14 martsa, namaly an'i Ivanishvili ny amin'ny fahitàny ny fandraisany anjara tao amin'iny lahatsary manala-baràka iny ny vadin'i Alasania, Natia Panjikidze, izay rahavavin'ny Minisitry ny Raharaha Ivelany teo ,Maia Panjikidze. “Tena gaga amin'ny fiompananao be tamin'ny anjara andraikitro aho ary ny fieritreretanao fa hampihena ny tanjak'i Irakli [Alasania] ny fanimbàna ny fianakaviako,” hoy i Panjikidze nanoratra tao amin'ny Facebook.
Tsy mbola namaly ny fiampangana azy hatreto i Ivanishvili.
Avy amin'ny tale jeneralin'ny Rustavi2, Nika Gvaramia, ihany koa ny fiampangana an'ilay mpanankarena an-davitrisany praiminisitra teo aloha, ilay mpiampanga izay, teo aloha, tafiditra tamin'ny raharaha mafana anà momba izay tpmpon'ny haino aman-jery, izay lazain'ireo mpanohana fa fanafenana ny ezaky ny governemanta haka ny tany. Nitaraina i Gvaramia fa nampitahorina taminà lahatsary ihany koa izy.
Tamin'ny tafatafa an-tsehatry ny Rustavi2 ny alina lasa teo, ny lehiben'ny Georgian Dream MP, Eka Beselia, niampanga an'i Gvaramia, amin'ny maha-mpampanoa lalàna jeneraly azy teo aloha sy minisitry ny fitsaràna teo ambanin'i Saakashvili, dia mifampizara heloka tamin'ny fanatanterahana ireo fakàna lahatsary mahiran-tsaina miresaka firaisana ireo, izay, araka ny filazàny, nanomboka teo ambany fahefan'ny filoha teo aloha.
Kanefa, ireo mpanao gazety aminà fahitalavitra malaza, Inga Grigolia sy Eka Mishveladze, nilaza fa samy nahazo fampitahorana ny hampisehoana ny fiainana manokan'izy ireo izy roa, nialoha sy taorian'ny fahatongavan'ny Georgian Dream teo amin'ny fahefana ny taona 2012.
Vao haingana, nisy nidaroka sy nitifitra tampoka tany Tbilisi ny vadin'i Mishveladze, Minisi-panjakana teo aloha nisahana ny Fidirana ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana sy Euro-Atlantic, Alexi Petriashvili, iray amin'ireo mpitarika ny Antoko Demokraty Malalaka an'i Alasania. Nieren-doza tamin'ilay fanafihana moa i Petriashvili, izay ahenoana feo mandeha hoe misy hifandraisany amin'ny fanafihana ara-politika na amin'ny tenany manokana.
Tsy nanamarika i Mishveladze raha ahiany ho misy fifandraisany eo amin'ireo lahatsary fampitahorana sy ny fanafihana ny vadiny.
Kely finoanaireo mpanaramaso ny fiarovana zon'olombelona momba ny fahafahan'ireo manampahefana tonga hatrany amin'ny fandefasana lahatsary manala-baràka, kanefa, milaza ihany izy ireo fa mety misy tomponandraiki-panjakana ambony ihany tafiditra amin'io raharaha io.
MAndritra izany, miakatra ny hafanana mikasika ilay raharaha ao amin'ny parlemanta, izay nipoahan'ny ady teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny Georgian Dream sy ny UNM ny 16 Martsa teo.